Maalinta Naafada Aduunka oo si weyn looga xusay Magaalada Bosaaso. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maalinta Naafada Aduunka oo si weyn looga xusay Magaalada Bosaaso.
Maalinta Naafada Aduunka oo si weyn looga xusay Magaalada Bosaaso.
December 3, 2009 - By: Abdirahman. A
Munaasabad lagu maamusaayay maalinta Caalamiga ah ee Naafada aduunka ayaa maanta ka dhacday xarunta Dowlada Hoose ee magaalada Bosaaso.
Munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qeybgalay masuuliyin fara badan oo ka tirsan Dowlada Puntland,kuwa ka socda Hay’addaha Caalamiga,Isimo,Waxgarad,Ururada Haweenka iyo Fanaaniinta walaalaha gobolka Bari.
Waxaana intii ay socotay munaasabadaas laga soo jeediyey khudbado looga hadlaayay dhibaatooyinka heysta dadka naafada ah iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in la taageero.
Duqa ahna Gudoomiyaha golaha degaanka ee Bosaaso C/risaaq Xareed Ismaaciil oo ka hadlaayay munaasabadaas ayaa sheegay in ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo heysta dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Bosaaso isagoo ku baaqay dadka Soomaaliyed ee wax haysta gaar ahaan ganacsatada iyo Bulshada kaleba in ay Gargaar u fidiyaan Walaalahooda naafada ah.
Mr.Xareed oo soo hadal qaaday falalka lidi ku ah Amaanka oo mudooyinki la soo dhaafay ka dhacaayay meelo ka tirsan Puntland gaar ahaan magaalada Bosaaso,waxaana u sheegay in falalkaas lagu khalkhal gelinaayo Amaanka Puntland,wuxuuna ugu baaqay Bulshada Bosaaso in ay Ciidamada Amaanka kala kaashadaan sugida Amaanka iyo nabad galyada.
Gudoomiyaha Ururka Naafada Gobolka Bari Aadan Cismaan Aadan oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyey heerarki kala duwanaa ee u soo maray Ururka naafada gobolka Bari,isagoo sheegay in mudadi u dhisnaa Ururkaas uusan wax taageero ka helin Dowlada Puntland.
Waxaa u sheegay in Ururka naafada gobolka ay mar weliba taageerto Hay’adda lagu magacaabo GRT taasoo buu yiri mar weliba soo gaarsiisa ururka qalab isugu jira fiisatariyo iyo qalab kale oo wax weyn u qabta Ururka naafada.
Si kastaba ha ahaatee Ururka naafada ee gobolka Bari oo la aas aasay sanadi 2004-ti waxaa ku mideysan 627-qof oo isugu jira Rag iyo dumar kuwaasoo dhamaantood naafo ah ayna haysato dhibaatooyin badan oo xaga nolosha mana jirto cid ka tirsan Dowlada Puntland iyo Hay’addaha Gargaarka bixiya oo taakuleyn u fidiyey sida ay sheegeen.
Maalinta Naafada Aduunka ayaa sidoo kale laga xusay degaanada Puntland oo ay ka mid tahay Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland.
Waxaana munaasbada maalinta naafada ee ku beegan 3-da December ay ku soo aadeysa iyadoo dhibaatooyinkaas ay naafada la daaladhacayaan.
Aamina Ladan Axmed Cali
Siyaasi Juxa: Wasiir Goodaxoow Faraha kala bax waxbarashada Puntland
April 17, 2019 By HORSEED STAFF
DHAGAYSO: Barnaamijka Dhacdooyinka ee Idaacada Horseed